Wararka - Ma ogtahay dhammaan aqoontaan ku saabsan silig iska caabinta?
FeCrAl silig iska caabin ah
CuNi silig iska caabin ah
Bayonet Cunsurka kuleylka
Ma ogtahay aqoontaan oo dhan ee ku saabsan silig iska caabinta?
Wixii silig iska caabin ah, awoodda iska caabinteena waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo iska caabinta siligga iska caabinta. Markay sii weynaato awoodeeda, waxaa macquul ah in dad badani aysan aqoon sida loo doorto silig iska caabinta, mana jiraan aqoon badan oo ku saabsan siligga iska caabinta. , Xiaobian qof walba wuu u sharxi doonaa.
Silig iska caabin ah waa nooca ugu caansan ee kuleylka. Shaqadeedu waa inay abuurto kuleyl tamarta ka dib tamarta korantada u beddesho kuleyl. Silig iska caabin ah ayaa leh noocyo badan oo codsiyo ah. Qaar badan oo ka mid ah aaladaha kululeynta korontada ee sida caadiga ah loo isticmaalo waxay u isticmaalaan silig iska caabinta sida curiyaha kululaynta. Sidaa darteed, silig iska caabin ah waxaa loo isticmaalaa caafimaadka, kiimikada, elektarooniga, korontada, mashiinada birta, farsamada dhalada dhoobada iyo warshadaha kale.
1. Mabda'a shaqada ee silig iska caabin ah
Mabda'a shaqada ee silig iska caabinta ayaa la mid ah tan walxaha kuleylka kale ee birta ku shaqeeya, waana ifafaalaha kuleylka korontada ka dib birta tamarta. Kuleylinta korontada macnaheedu waa ka dib markay durdurka ka gudubto koronto-qabadka, hadda wuxuu dhalin doonaa xoogaa kuleyl ah waxaana lagu wareejinayaa kaariyuhu. Fiiladda iska caabinta lafteeda ayaa ah kaari bir ah, oo soo saari doonta kuleylka isla markaana siin doonta tamar kuleyl ah ka dib marka la tamariyo.
2. Qoondaynta silig iska caabin ah
Noocyada siligga iska caabinta ayaa loo qaybiyaa iyadoo loo eegayo waxyaabaha kiimikada ka kooban iyo qaab dhismeedka abaabulka silig iska caabinta. Waxaa jira fiilooyin iska caabin ah aluminium-chromium-aluminium iyo fiilooyin caabi ah oo nikeel-chromium ah. Sida walxaha kuleylka korontada, labadan nooc ee fiilooyinka iska caabinta waxay leeyihiin astaamo farsamo oo kala duwan.
3. astaamaha silig iska caabinta
Silig iska caabin ah waxaa lagu gartaa iska caabin ah heerkulka sare, kululaynta dhakhso ah, nolosha adeeg dheer, iska caabin deggan, leexashada xoog yar, leexashada dunta isku xidhka ka dib iskala, iyo dusha dhalaalaya oo nadiif ah Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa foornooyinka yaryar ee korontada ku shaqeeya, foornooyinka muffle, kuleylka iyo qalabka qaboojiyaha, foornooyin kala duwan, Tuubooyinka kululaynta korontada iyo qalabka guryaha, iwm. Baararka warshadaha kala duwan ee aan caadiga ahayn iyo kuwa shicibka ayaa loo qaabeyn karaa loona soo saari karaa iyadoo loo eegayo baahida isticmaalaha
4. faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka silig iska caabbidda birta-chromium-aluminium
Birta-chromium-aluminium silig iska caabinta ayaa leh faa'iidada heerkulka hawlgalka sare. Tijaabadu waxay muujineysaa in heerkulka ugu badan ee shaqeynaya ee siligga caabbinta birta-chromium-aluminium uu gaari karo 1400 ° C. Birta-chromium-aluminium silig iska caabinta ayaa leh nolol dheer, adkeysi badan, isku darka sare, iyo iska caabin qiiqa wanaagsan.
Faa’iido darrada siligga caabbinta birta-chromium-aluminium waa xooggiisa hooseeya ee kuleylka heerkulka sarreeya. Markuu heerkulku kordho, balaastigga siligga caabuqa birta-chromium-aluminium ayaa kordhin doona, taas oo macnaheedu yahay siligga caabuqa birta-chromium-aluminium ee caabbinta u nugul cilladaha heer kulka sare. Mana fududa in la dayactiro qallooca ka dib.
5.faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka silig iska caabinta niikel-chromium
Faa'iidooyinka siligga iska caabinta 'nickel-chromium alloy alloy' ayaa ah awood sare oo ku jirta deegaanka heerkulka sare, hawlgalka heerkulka muddada-dheer ee sarreeya ma fududa in la beddelo, mana fududa in wax laga beddelo qaab-dhismeedka, iyo baaxadda heerkulka caadiga ah ee caabbinta daawaha 'nickel-chromium' siliggu wuu fiican yahay, dayactirka ka dib cilladduna waa mid fudud. Intaas waxaa sii dheer, siligga iska caabinta 'nickel-chromium alloy alloy' wuxuu leeyahay xasaasiyad sare, magnetic-la'aan, iska caabbinta daxalka wanaagsan iyo adeegga muddada dheer.
Faa’iido darrada ay leedahay siligga iska caabinta ”nickel-chromium” ayaa ah in heer-kulka hawlgalka uusan gaari karin heerka siliggii hore ee iska caabinta. Soo-saarista siligga caabbinta niillada 'nickel-chromium alloy' waxay u baahan tahay adeegsiga nikkel. Qiimaha birahaan ayaa ka sareeya kan birta, chromium iyo aluminium. Sidaa darteed, qiimaha waxsoosaarka ee siligga iska caabinta kiimikada 'nickel-chromium alloy' waa mid aad u sarreeya, oo aan ku habboonayn xakamaynta kharashka.
No.8, Laohuren Industrial Park, Xuzhou Zone Development Economic, Jiangsu, 221011 Shiinaha
Warshad Tel:0086 516 8773 8786
Nichrome, Nickle Chrome Daawaha Siligga, Mashiinnada Ironing, Codsiyada Sayniska, Ribbon Daawaha Daaqadaha, Ion Nitriding,